Dowlada Jabuuti oo Ciidamo dheeraad ah u soo direysaa mar kale soomaaliya. – idalenews.com
Ismaaciil Cumar Geelle madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti ayaa ka hadlay arrimaha Soomaaliya iyo is bedelada haatan ka jira.
Madaxweyne Geelle ayaa raja wanaagsan ka muujiyay ammaanka dalka Soomaaliya isagoona farta ku fiiqay dadaaladii ay bixiyeen ciidamada afrikaanka ee ku sugan gudaha Soomaaliya is bedleada ay ku soo dabbaaleen ammaanka guud ee dalka.
Ismaaciil Cumar Geelle oo waraysi gaar ah siinayay Idaacadda VOAda laanteedka afka Soomaaliga ayaa sheegey in dhawaan ay rajaynayaan in betelyan ka mid ah ciidamadooda in ay u diraan gobolada dhaxe ee Soomaaliya oo qayb ahaan uu sheegay in loo qorsheeyay ciidamo gaarsiinta Jabuuti ee Gobolada dhaxe.
Mar wax laga weeydiiyay madaxweynaha wada hadal shabaab lala galo siduu u arko ayuu sheegay inaysan jirin wax wada hadal ah oo ay diyaar u yihiin shabaab sidaa darteedna ay ka go’an tahay sidii Mandiqadda ay uga samayn lahaayeen Dawlad xoog badan oo Islaami ah taasina ma aha ayuu yiri mid suurta galaysa.
Si kastaba hoggaamiyaha dalka jabuuti ayaa hoosta ka xarriiqay ugu dambayn illaa Seddax todobaad gudahooda in batalyan ciidamadooda ka tirsan ay ku gaarsiin doonaan gobolada dhaxe si ay uga qayb qaataan dadaalka lagu doonayo in shabaab looga saaro goboladaas.
Idale News Online, jabuuti.
Daawo: Sheeko gaaban oo laga sameeyey damaca siyaasiga iyo shirqoolada ay maleegaan